Tabaraha Juventus Andrea Pirlo Oo Bahdilay Xidigaha Kooxdiisa Kadib Guuldarii Inter Milan
HomeWararka Ciyaaraha MaantaTabaraha Juventus Andrea Pirlo oo bahdilay Xidigaha Kooxdiisa kadib guuldarii Inter Milan
January 18, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Italy 0
Tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa dhaleeceeyay qaab ciyaareedka ciyaartoydiisa ka dib guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Inter.
Naadiga San Siro ayaa hoggaanka la wareetay kadib markii Arturo Vidal uu dhaliyay kubad madax ah qeybtii hore ee ciyaarta ka hor inta uusan Nicolo Barella goolka labaad ku darin wax yar ka dib markii lagu kala nastay goolka hore.
Guuldarro ayaa ka dhigeysa Juve inay ku jirto kaalinta shanaad ee kala sarreynta Serie A , iyagoo 7 dhibcood ka hooseeya labada hogaamiye ee AC Milan iyo Inter .
Pirlo ayaa weerar ku qaaday ciyaartoydiisa ciyaarta ka dib.
“Waa guuldaro xun, ma aanan dheeli karayn wax ka xun tan mana aheyn wax lama filaan ah, laakiin waa inaan kor u qaadnaa madaxeena oo aan u diyaar garownaa kulanka Arbacada iyo Supercoppa ee Napoli ,” ayuu u sheegay Sky Sport Italia.
Hadalka ah in aysan Juventus u ciyaari karin si ka liidato sidaasi ayaana ahaa ciwaanka ugu weyn ee warbaahinta caalamka maanta soo qaataan.